Sida loo sameeyo Halloween Videos ka Start ee Dhamaystirka
Haddii aad rabto in aad haysato xisbiga Halloween fiican ee caruurta iyo inaan weligay loo ilaalin nidaamka oo dhan, waxaad u baahan kartaa in ay bartaan si ay u sameeyaan Halloween videos. Iyada oo dad badan oo heer sare shaki lagama maarmaan ah, waxaa weli jira qaar ka mid ah muuqaalada u Halloween videos. Hubi videos Halloween waxaan saxar la Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) hoos ku qoran.
Marka hore, doortaan mawduuc
Waa maxay horyaalka maqaalkan waa dulucda ah ee video ah. Kala duwan video mawduucyada ayaa diyaar kuu ah. Tusaale ahaan, qofka laga badiyay, ugaadhsiga Zombie, cunto karinta lagu hoobtay, bahal bocorka, guriga vampire iyo wixii la mid ah. Waxaad ka heli kartaa in ka badan haddii aad qabto wadnaha kaftan ah sida aniga oo kale.
Labaad, waxa aad dhagaystayaasha?
Dhexe aad dhagaystayaasha waa furaha si ay u guulaystaan. Haddii aad u muujin dadka waaweyn, waa in ay noqon cabsi-ka-dhimasho. Maxaa dhacaya haddii kids? Waxaad u baahan kartaa in aad ku darto qaar ka mid ah alaabtii lagu qoslo ama cute gudaha.
Saddexaad, diyaarin qabnay
Qabnay Diyaarinta ku kici doontaa waqti badan. Sida laga soo xigtay mawduucyada, halkan waa qoraal oo aan si aad tixraac.
Qofka laga badiyay: Nin Ordi oo kale si aannu qoryo ah, losts in daqiiqo Dabayl daran oo samada waa sii madow iyo madow markaas nalalka muujinaysaa weji cabsi hilaac.
Ugaadhsiga Zombie: in habeen dhexe qof si deg deg ah taabtay, albaabka. Albaabka fur, saaxiib ku daatay fells in ay gacmaha oo wuxuu ku yidhi "Zombie ayaa ugaarsi magaaladan, kaliya ordaan". Dhowr daqiiqo ka dib, saaxiib uu noqdo Zombie dhab ah doonaya in ay cunaan qoysaska oo dhan.
Karinta dhiig, koox ka mid ah ardayda maqlay buuq badan qaar ka mid ah marka la seexdo ku jira xerada. Markaasuu u baxaan inay guri duugoobay ka soo heli cuntooyinka yummy qaar ka mid ah. Waxay u riyaaqay la yaab leh dhadhanka. Si kedis ah, hal arday ka heli kale ee wax cunayo qaar ayaaba ka lagu hoobtay. Wax laga yaqyaqsado iyo cabsi dhacaya. Cuntooyinka oo dhan noqdaan jirka aadanaha ku daatay.
Bahal Bocor: Fadhiga dayrka iyo-habeen moon raaxaystaan. Aabbaha waxaa hoosta iyo samaynta bocorka Halloween ag. Ka dib markii caanaqubta, a, aabbahaa waa faaskii intii galay masaakiinta ku daatay. Waxaad u muuqata dib u helay bahal bocorka, iyadoo wajiga xun. Qosol iyo dabagalka aad ka dib.
Vampire guriga: Lights waxaa Laabideeda horteed, miiska waxaa ka buuxa skulls. Web Spider waa meel. Waxa aad maqli karo waa codkii jecel yahay - Igu quudi maskaxdaada.
Dhab ahaantii waxaan kaliya furo maskaxdayda wax yar, waxaad kala socon kartaa qabnay in ay ka sii adkayn sheekada.
Tan afraad, bilaabaan in ay toogtaan
Horena waa ka weyn, hadda aad bilowdo in ay toogtaan. Qurxin goobta sida aad script, xaqiijiyo jilayaasha sax ah oo aad u hubiso inaad leedahay fiidiyo ah digital sida Sony HDR-CX380 / B. Qaybtan, waxaad codsan kartaa qaar ka mid ah caawimaad ka saaxiibada sida aad adiguba indhahaaga labaad, maxaa yeelay, waxaa u roon in haddii aad la Malaa'igta kala duwan, taas oo si fiican u tahay tallaabada xigta toogasho karo goobta - tafatirka.
Fifth, xaalkaa Halloween videos
5 qaybood oo la bixiyo waa in fiiro in tallaabadaas.
A. Qaar ka mid ah xeerarka aasaasiga ah marka sixiddiisa Halloween videos. Muuqaallo ku Irbadda waxa loo kala saari karaa iyada oo si qoto dheer iyo width. Ha isticmaalin kala-guurka inta u dhaxaysa goobaha kala duwan haddii aad rabto si ay u muujiyaan qaabka ay filimka Hollywood. Isku day inaad goobaha deg deg ah oo kala duwan leh si qoto dheer oo kala duwan iyo width si ay u sii. Isticmaal dhaqaaq gaabis ah marka aad rabto in ay diiradda saaraan wax. Waqti dheeraad ah marka aad rabto in aad si ay u muujiyaan sawir oo dhan si ay dhagaystayaasha.
B. feature ugu weyn ee Halloween videos xasili in codad iyo saamaynta muuqaal ah. Waxaa jira codad lacag la'aan ah oo aad u xun waxaa laga heli karaa internetka. Xabaalo dabataagan, albaab furan, naag qaylo, ooya vampire, guuxeen yaxaas iyo wixii la mid ah. Hubi in ka badan Halloween codad free halkan .
C. Qaar ka mid ah saamaynta gaar ah Halloween laga heli karaa qaar ka mid ah video tifaftirayaasha xoog badan, kuwaas oo siiya mawduucyada Halloween. Sida mawduucyada kala duwan, saamaynta ay noqon kartaa kala duwan. Habeen A eryay lagu dari karaa nalalka, caddaado wajiga, guriga duugoobay, wadada lagu hoobtay iyo wixii la mid ah. Sheekada vampire A lagu qurxiyey karaa lafo dad, hadda nasoo ku daatay, mici xayawaan iyo xitaa sawirada sanam ka Dairies Vampire ayaa ah. Video witched A gelin karaa qaar ka mid ah duulaya xaaqin, hat saaxirad oo soo huwaday. Hubi in ka badan Halloween saamaynta video halkan.
D. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay saamaynta qaar ka mid ah oo gaar ah sida green-screen, marka aad rabto in aad bedeli soo jeeda si ay goobaha qaar ka mid ah oo gaar ah sida dagaalka kula meydkiisa ku wareegsan. Ama aad rabto in aad shaqo PIP (saamaynta multi-screen) si ay u muujiyaan goobaha spooky kala duwan ee shaashadda isla. Markaas awood leh saamaynta kor ku xusan oo si sahlan loo isticmaalo video editor waa waxa aad u baahan tahay. Fiiri sida loo doorto barnaamij tafatirka video halkan .
E. Ka dib dooran video ah editor midig, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo edit Halloween videos talaabo talaabo ah.
a. Download iyo rakibi Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) hoos ku qoran ( guji in la ogaado xeerka alaabta )
b. Qor sheekada oo dhan aad rabto in aad u sheegto. Maxaa dhacaya haddii aadan haysan wax sheeko gaar ah ku hay? Waxaad ku qori karta nidaamka oo dhan la fiidiyo marka loo diyaarinayo ay ka mid yihiin sida loo sameeyo bocorka Halloween ah, noocyada cuntada Halloween diyaar u ah caruurta, caruurta goobta si uu u daawado filimada xun, ee sheekooyinka hurdada xun oo aad diyaar u this xisbiga Halloween, xilligan marka caruurta saaray caadooyinkii Halloween iyo qurxiyo guriga idiinku sameeyey xisbiga this. Ama xitaa download qaar ka mid ah filimada xun online iyo jar qaybaha ugu xiiso doonayso inaad ka dibna iyaga ku milmaan si wadajir ah ula saamaynta spooky.
c. Connect fiidiyo ah in ay PC ka dibna dajiyaan oo dhan files video iyo sawiro in Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) si toos ah. Hubi filimada gaagaaban oo aad u xun ee carruurta aan PC soo socda (soo bixi YouTube la Free YouTube Downloader ). Ma u baahan tahay qaar ka mid ah filimada dheer xun u Halloween, halkan ka fiiri .
d. Double click in aan bilowno Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) iyo dooran Full Feature Mode.
e. Guji "Import" in ay ku shuban dhammaan faylasha in "Users 'Album" meesha loogu tafatirka soo socda.
f. iyaga oo dhan Dooro iyo jiidi-n-dhibic si ay si toos ah waqtiga
g. Guudmar video oo guji "hako" button hoos suuqa kala Falanqeynta qaybta aad rabto inaad sii la maqas "Split" ah. Ka dibna mar kale guji markay ku dhaqaaqdo in ay ka qeyb aad rabto in aad tirtirto. Waxaa jira fikradda bilowga dhibcood iyo dhibic dhamaadka ah. Waxaad jari karaa in bilowga dhibic ka dibna jaray mar kale dhibic dhamaadka. Qaybta u dhexeeya bilowga iyo dhamaadka dhibcood waa wax aad u baahan tahay.
h. Dooro qaybta aad rabto in aad tirtirto oo ka dibna riix "Delete" button
i. Waxaad jiidi karaan bar slide ah si ay ula qabsadaan size aragtida Timeline ah.
j. Markaas isticmaali saamaynta qaar ka mid ah gundhig sidii dab oo kale si ay u abuuraan saamaynta muuqaal creepy ama spooky. Waxaad u baahan tahay inaad jiidi saamaynta in ay marka hore Jadwalka inay ku eegaan natiijada. (Waxaa kor u qaadi doona si Falanqeynta deg dega ah ee waqtiga gaaban.)
k. Haddii aadan cod u eg midka asalka ah, waxaad xaq u riixi kartaa file ee waqtiga iyo "Aamusi" waxaa. Markaas isticmaali saamaynta dhawaaqa gundhig sida "wabatay" si ay u abuuraan Halloween saamaynta dhawaaqa.
l. Ama waxaad xitaa isticmaali kartaa voiceover si ay u qoraan wax aad rabto, kaas oo geli doona in file video si toos ah. Haddaba adiga oo keliya riix kartaa "Qor Voiceover a" kadib markii button aad qotomisay dhibic bilowga. Dhab ahaantii inta badan filimada horriable, kuwa hawlaha aasaasiga ah waa wanaag ku filan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad wax ka bedel caadi videos in kuwa spooky la saamaynta gaar ah, waxaad isticmaali kartaa hawlaha soo socda.
m. function Isticmaal PIP in lagu daro qaar ka mid ah madaxda jinniyada ama Ibliisku wajiga in video ah. Amase yaa muujin kara multi-screen waqti isku mid ah iyo hubi sida loo sameeyo multiscreen video halkan . Ama bedeli asalka la greenscreen iyo hubi sida loo isticmaalo greenscreen halkan .
Sixth, badbaadin iyo naadiya dhufto ee kala duwan
Ka dib markii saxar ah, waxa la joogaa wakhtigii si loo badbaadiyo iyo daabacaan this video Halloween. Guud ahaan, aad jeclaan lahayd inaad la wadaagto online si toos ah. Markaas waxaad riixi kartaa fursadaha YouTube, Facebook ama vimeo. Waxa kale oo aad ku badbaadin karto si aad PC ama qalab. Waa maxay dheeraad ah, waxa ay taageertaa si ay u gubaan si toos ah DVD. By jidkii, waxaad badbaadin kartaa mashruuca video ay dhacdo in aad rabto in aad furto oo reedit ah.
> Resource > Video > Sida loo sameeyo Halloween Videos tan iyo bilowgii ilaa ugudambaysta